Loza ho an’ny toekarena shinoa ihany koa ny Wuhan coronavirus · Global Voices teny Malagasy
Loza ho an'ny toekarena shinoa ihany koa ny Wuhan coronavirus
Voadika ny 11 Avrily 2020 16:50 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, čeština , українська, Français, Español, bahasa Indonesia, Nederlands, Italiano, English
Lelavola 100 yuan iray – vola fampiasa matetika any amin'ny tanibe Shina ary mampiseho an'i Mao manao tampim-bava. Sary avy amin'i Oiwan Lam, nahazoana alàlana.
Rehefa mifanontona ny valanaretina sy ny fandaniambola be mahazatra amin'ny fankalazàna ny taombaovao Shinoa, dia marary mafy ihany koa ny toekaren'ny firenena. Ny kabarin'ny governemanta shinoa dia mifototra betsaka amin'ny fampanantenana fahombiazana ara-toekarena ho an'ireo saranga afovoany andàlam-pitomboana, ary ny fisehoan'ny tsy filaminana ara-ketra, tahaka ireo hitantsika nandritra ny fiparitahan'ilay valanaretina coronavirus tao Wuhan, dia mety hisy fiantraikany goavana amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-politika.
Tahaka ny ‘fivavaham-panjakana’ ny fitombon'ny Harinkarena anatiny (PIB)
Ny zava-nisongadina indrindra tato anatin'ny efapolo taona dia ny fialàn'i shina tamin'ny satan'ny firenena an-dàlam-pandrosoana ho amin'ny firenena voalohany matanjaka ara-toekarena manerantany. Fampiasan'ny governemanta sy ny Antoko kaominista Shinoa (CCP) matetika io fanambaràna io mba hitadiavany ny fitokisana sy ny fanohanana avy amin'ireo vahoakany 1,3 lavitrisa. Nanomboka tamin'ny 1979 ny fihavaozana ara-toekarenan'i Shina ary tato anatin'ny am-polo taona vitsy dia nahatalanjona ny fisondrotry ny harinkarena anatiny, matetika tarehimarika roa. Rehefa tonga filohan'i Shina i Xi Jinming tamin'ny 2012, dia niovaova teo anelanelan'ny 6 sy 8 isan-jato io tarehimarika io. Tsara hamafisina fa mila fandalinana ny fahamarinan'ny angondrakitra omen'ny loharanom-baovao ôfisialy shinoa satria malalaka be ny fampiasan'ireo tompon'andraikitra shinoa ny fahalemen'ny politika mifamatotra amin'ireny tarehimarika ireny amin'ny ‘filaminana ara-tsosialy’ ao anatin'ireo kabariny sy ny fanambarana ataony.
Fifanarahana ara-tsosialy azo fintinina amin'ny hoe ‘fahombiazana tsy misy fahalalahana’ no fototry ny fanagiazan'ny PCC (Antoko Kaominista) ny firenena. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, dia raha mbola mitombo sy misitraka ny fitsipipiaina tsy misahirana ireo olona maro 400-tapitrisa ao amin'ny sokajy afovoany dia tsy ho voatohintohina mihisty ny antoko, noho ireo tatitra miresaka kolikoly, fanodinkodinana ny fahamarinana, ary fitomboan'ny sivana amin'ny haino aman-jery sy ny filazàmbaovao.
Hazavain'izany ny fiheverana fa toy ny tondro nasionaly amin'ny fanatanterahana ny ‘fifanarahana ara-tsosialy’ ny fitombon'ny harinkarena anatiny, sy antony ireo tsy fetezana rehetra hiteraka ahiahy goavana eo amin'ny governemanta sy ny antoko, fa ho an'ny olom-pirenena ihany koa izay matetika maneho ny heviny amin'ny fanoherana an-tserasera , indraindray amin'ny hetsi-panoherana ivelan'ny serasera, ary ho an'ireo manan-katao, amin'ny alàlan'ny famindràna ny renivola na ireo fianakaviana sy ireo fandraharahana rehetra ho any ivelany.
Loza ho an'ny fizahantany sy ny indostria mpamokatra sarimihetsika ny coronavirus ao Wuhan
Raha toa ka nangitakitaka tamin'ilay vaovaon'ny valanaretina coronavirus tao Wuhan ny tsena manerantany, ary maro no nilaza ireo ho vokatr'izany amin'ny raharaham-barotra sy ny fampiasàmbola shinoa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, dia ny toekarena shinoa no voakasik'izany mivantana. Efa maneho sahady ny fitontongànana goavana ireo indostria sasany.
Noheverina fa lafatra hatry ny ela, nirongatra tampoka ny fizahantany anatiny sy iraisam-pirenena any Shina, heverin'ireo sokajin'olona afovoany mitombo isa fa mariky ny fahombiazana ara-tsosialy ny fandehandehanana. Fara-tampony ny fivezivezena anatiny rehefa fotoanan'ny taombaovao Shinoa satria ny fivorian'ny fianakaviana amin'ny alàlan'ny taranaka maro mifandimby no takian'ilay fombandrazana. Ho an'ny fankalazana 2020, fivezivezena 3 lavitrisa no nomanina. Noferan'ny governemanta anefa izany fivezivezena izany ka olompirenena maro no natahotra dia nampiato ny fikasàny handeha.
Araka ny fanamarihan'i Ting Lu, manampahaizana manokana momba ny fizahantany ao amin'ny Nomura Asset Management, dia taorian'ny valanaretina SARS 2002-2003 no naha-voadona voalohany ny fizahantany anatiny shinoa :
“Nilatsaka 2 isan-jato ny fisondrotry ny tena harinkarena anatiny Shinoa. 11.1% izany ny efabolana voalohan'ny taona 2003 ary nidina ho 9.1% tamin'ny efa-bolana faharoa, talohan'ny niakarany indray ho 10% ny efa-bolana fahatelon'io taona io ihany. Ny ‘secteur tertiaire’ no niteraka io fisondrotana io, indrindra fa ireo singa roa lehibe eo amin'ny sehatry ny harinkarena anatiny : 1- ny fitaterana sy ny fanangonana ary ny paositra, ary ny 2- ny sehatry ny trano fandraisambahiny sy ny trano fisakafoanana”
Voadona mafy ihany koa ny indostrian'ny famokarana sarimihetsika izay heverina ho tsena faharoa lehibe indrindra manerantany tamin'ny fotoana nanambaràna ny fisian'ilay valanaretina. Voalahatra mandrakariva hifanindry amin'ny fialantsasatra lavabe ho fankalazàna ny taombaovao shinoa – maharitra eo amin'ny folo andro ka hatramin'ny roa herinandro eo ho eo – ny famoahana ireo sarimihetsika lehibe mahafa-po ny mpijery satria manam-potoana hijerena sarimihetsika ny olona. Amin'ity taona ity, nahemotra amin'ny daty tsy voafaritra ny famoahana ireo sarimihetika malaza. Ankoatr'ireo trano lehibe famokarana sarimihetsika, isan'izany ny Hengdian studio, heverina ho ny lehibe indrindra manerantany, dia trano fijerena sarimihetsika 70.000 mahery no nakatona mba hisorohana ny fihanaky ny viriosy. Misy fiantraikany amin'ny politikan'ny indostria shinoa famokarana sarimihetsika izay voafehin'ny fotokevitry ny antoko tanteraka ihany koa izany. Feran'ny antoko ny isan'ny sarimihetsika vahiny satria matetika ireny no manintona kokoa ny mpijery noho ny sarimihetsika vokarina ao an-toerana.
Ao anatin'ity bitsika ity ny sarin'ny fanambaràna ôfisialin'ny fanakatonana ny trano fanodinana sarimihetsika Hengdian noho ny fanairana ny amin'ny coronavirus tao Wuhan.
Tena mety ho voakasik'izany ny toekarena anatiny. Mbola aloha loatra izao raha hiresaka tarehimarika, fa ampy ny filazana fa vanimpotoana fiantsenàna faobe ny taombaovao shinoa, misy ny tolotra manokana, ny sakafo an-kalamanjàna ary ny fanolorana fanomezana. Raha maro be ny fividianana natao an-tranonkala, dia naato na nampiadanina ny fanaterana ny entana noho ireo loza mifandraika amin'ny coronavirus.
Foibe indostrialy manan-danja ihany koa i Wuhan araka ny fanazavan'i Benny Liu, filoha mpiara-mitantana ny hetsika KPMG any Shina :
“Fototry ny indostria, ny fikarohana sy ny fanabeazana fototra ary foiben'ny firaisan'ny fitaterana ho an'ny firenena i Wuhan. 7.8% ny fiakaran'ny harinkarena anatin'i Wuhan tamin'ny 2009, izany hoe niakatra 1.7 isanjato mitaha amin'ny salan'ny firenena, araka ireo tarehimarika avy amin'ny manampahefana ao an-toerana”.
Raha ny marina dia marobe amin'ireo birao foibe 500-nà kaompania sy orinasa i Wuhan.
Amin'ity toe-draharaha ity dia mety tsy ho ampy hamerenana ny fitokisana ny amin'ny fahafahan'ny governemanta sy ny antoko hanaja ny ‘fifanarahana sosialy’ ireo teny filamatra sy ireo fanambaràna nataon'ny governemanta foibe sy ny governemanta any an-toerana. Araka ny voalazan'i Xi Jinping izy tenany tamin'ny fivoriamben'ny antoko, ny kongresy faha 19-n'ny CCP tamin'ny 2017 :
“Izay atrehantsika ankehitriny dia ny fifanoherana eo amin'ny fampandrosoana tsy voalanjalanja sy tsy mifanaraka amin'ireo filàn'ny vahoaka tsy mitsaha-mitombo mba hananana fiainana tsaratsara kokoa.”
Jereo ny fandrakofana manokana ataon'ny Global Voices momba ny fiantraikan'ny coronavirus ao Wuhan.